Liiska siyaabo si aad u hesho si aad naftaada og xoogaa soo roonaadey, samaynta aad "xoogaa Lotta ah" more dateable
Khaladka ugu dad badan sameeyaan noloshooda shukaansi ay aanu fikrad wanaagsan ah oo ay, isu, waa. Waxaa laga yaabaa horjeedda, laakiin marka aad si firfircoon isku dayaya in aad heshaa qof ah waa mid ka mida waqtiyada ugu wanaagsan ee ay diiradda naftaada iyo waxa aad ka dhigaysa “tick”. Haweenka, in ka badan ragga, u nugul “Waxaan jeclahay inaan wax kasta oo aad jeceshahay”-Syndrome (laga yaabee in ay sabab u tahay ka dhalto dhaqanku filayo in haweenka la rejeynayaa in uu u jajabnaado ka, kuwa amorphous maqan danahooda gaarka ah), ugu dambeyntii keentay in xiriir aan lagu qanci karin iyo unfulfilling ugu fiican; iyo wax kadis ah, ayaan waqti iyo cadho ugu qofka kale qabo “beddeleen”, at xumaa.
Mid ka mid ah erayadayda jecel wax sidan oo kale–sidee qof kale u malaynayeen inay wax ogaadaan oo aad jeceshihiin, haddii aadan ogeyn oo aad jeclaan aad? Maalgelinta naftaada og kuu ogolaanaya in aad ogtahay waxa aad keenaan miiska, oo wuxuu u fududaynayaa aad iyo aad One xaq u leedahay in la aqoonsado kasta oo kale oo lagu soo jiidatay in tayada in mana aha in la beddelo iyada oo shirkadda ama la sano ah.
Sida Shel Silverstein waxa qoray in uu gabay, “-Gashiga”:
Waxa ay lahayd maqaarka buluug
Oo sidaas buu u sameeyey
Waxa uu hayo ayay soo qarsadeen
Oo sidaas daraaddeed ayay yeelaysay
Waxay isagii doondoonayeen buluug
Ay nolosha oo dhan iyada oo loo marayo
Markaas xaq ag maray–
Mana aha ogaa
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha ay ku bartaan iyo aad u jeclahay, si qof kale awooddo, aad!
1. Naftaada Qaado Out
Sidan waa la tuuray ay kala duwan iyo toban kun “is-caawin” gurus, buugaag, iyo ururrada haweenka. Dadka inta badan u maleynayaa in ku saabsan in la eego casho, kaas oo noqon kara handadaad iyo sirgaxan haddii aadan quraacdeen in dadweynaha oo keliya ka hor inta. Oo saasay wada noqon karaan kulan kasta oo muhiim ah, ilaa iyo inta ay tahay madadaalo iyo wax aad ku raaxaysato–movie ah (mar nalalka waxay hoos ugu dhaadhici, qofna waxaa diiradda lagu saaray oo keligiis baa fadhiya), ciyaarta kubada a, ama meel laga yaabaa safar maalin cusub.
2. Waa maxay Ma rabtaa in aad samee Maanta?
Hayso markii qaar ka mid ah lacag la'aan ah? Jooji daqiiqad ah oo cad is weydiiso waxa ka dhigi lahaa in aad ku faraxsan yahay xaq markaas oo halkaas–ka dibna tag u qaban! Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud iyo wax ku ool ah si ay u habayn baxay buuqa nolosha iyo joojin waqti lumin by la nuugo galay Facebook ama telefishan. Waxa kale oo aad ka furmay ilaa in badan oo random, qalloocinaya sixir iyo markooda, iyo kulan in dad badan oo idinka sii badan lahaa, thoughtlessly iyo isag oo ay ku dhinteen markii. In geeddi-socodka, waxaad ogaan doontaa in aadan qof u baahan weheliyaan aad u faraxsan–aad noqon kartaa farxad iyo dambi by isagoo ujeedo leh doorashooyinkaaga.
3. Weydii Friends Your
Tani waa nooca caddaynta ee hawsha caan Facebook waydiinaya dadka inuu ka hadlo in boostada Eray oo qeexaya waraaqaha ah. Laakiin waxaad baran kartaa adiga kugu saabsan, ama ugu yaraan ku saabsan dadweynaha qiyaasi iyo aragti naftaada, adoo waydiinaya saaxiibadaa sida ay ku tilmaami lahayd. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad iftiimin ah “Waxaad” in aad u soo bandhigayno dunida, oo sidaas daraaddeed taariikhaha. Malaha, iyo u badan tahay, this kulan waxa aad rumaysan tahay in aad is dhab ah. Laakiin haddii aad u dembaabo arko isagoo qof ka duwan waxa aad og tahay mid run ah oo adiga kugu saabsan–taas la naxli laga yaabaa in sidii taxane ah oo aan lagu guuleysan, xiriirka wareer.
4. Isku day Waxyaabaha New
Tani waa nooca lid ku ah #2. Halkii naftaada daaweynta in wax aad og tahay in aad jeclaan doonaa samaynaya, sameeyo wax cusub,! Marna ha fuulin faras hor? Raadi shirkad bixisa raacid raad fudud. Anigu ma Wakiil wax cabsi galinaysa surwaal ah off aad ah u samayn, sababta oo ah–halka in jiidan laga yaabaa taariikhaha–aad ka cabsataan mashquulin laga yaabaa inay awoodaan inay ku raaxaystaan ​​aragnimo cusub. Dhammaadka maalinta, aad go'doonsan doonaa waayo-aragnimada nolosha kale oo caawiya adiga iyo danahaaga qeexo, waxaana laga yaabaa inaad meel kale oo xirfad iyo wada hadalka si ay u keenaan miiska.
Yeelashada dareen wax kalsooni is waa soo jiidasho leh. By beerida aad dareen is, waxaad noqon doontaa farxad ah, dheeraad ah oo ku rumoobay qof oo aad u fara badan oo ay u siiyaan in ay xiriir yeelan doontaa; iyo in Intaa ka, waxa aad helaysaa badan oo xiiso leh ey u baran AAD in aad dhammaan ku saabsan tahay.